Jaffa မြို့ဟောင်း…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » Jaffa မြို့ဟောင်း….
Posted by hmee on Jan 8, 2012 in Creative Writing, Local Guides | 17 comments
ကလီယိုပက်ထွှာရေချိုးခန်း နေရာကို အပေါ်စီးက ရိုက်ထားတာ။
အပေါ်က ရုပ်တုကို ရေးထားတဲ့စာ။
တံတားထိပ်က ကုန်းပေါ်က ရာသီခွင်ပုံလေး။
တံတားလက်တန်းမှာ အခုလို ရာသီခွင်လေးတွေ ရှိတယ်။ ကိုယ့်ရာသီခွင်ကို ကိုင်ပြီး ဆုတောင်းရင် နောက်တခါ ထပ်လာရတယ်လို့ ပြောတယ်။
နပိုလီယန်တံတား။ အိမ်ကြီးရှင် ရိုက်ပေးတာ။
မြို့ဟောင်း အ၀င် လမ်းအလယ်က နာရီစင်။
ခန့်ညားလွန်းလို့ လမ်းလယ်ကနေ ရိုက်ထားတာ။
အစ္စရေးကို စရောက်ရောက်ခြင်း ပထမဆုံးရောက်ခဲ့တာက လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၄၀၀၀က မြို့ဟောင်း Jaffa ကိုပါ။ Telaviv နဲ့ကပ်လျှက်မို့ နီးပါတယ်။ ( လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၇၀၀၀ကမြို့ကတော့ ဂျယ်ရီကိုဆိုတဲ့မြို့ပါ ပါလက်စတိုင်းဘက်မှာမို့ မရောက်ဖူးပါဘူး)။ ရောက်စတုန်းက ရွာသူကလည်း မဖြစ်သေးတာမို့ မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ သတိမရဘူး။ ကိုယ့်ပုံတွေပဲ လျှောက်ရိုက်နေတာလေ။ နောက် ရွာသူ ဖြစ်ပြီးမှ နှစ်ခေါက် ထပ်ရောက်ပေမဲ့ သွားဖြစ်တာက ညနေပိုင်း အချိန်တွေမို့ ဓါတ်ပုံတွေက မကြည်လင်တာနဲ့ မှောင်တာနဲ့မို့ မတင်တော့ဘူးဟယ်လို့ စိတ်လျှော့ထားတာပါ။ ဒီနေ့တော့ ပြန်ချိန်နီးပြီမို့ အိမ်အပြန်လက်ဆောင်ဝယ်ချင်တယ် ပြောတာနဲ့ အိမ်ကြီးရှင်က Camel ဈေးလိုက်ပို့ပေးပါတယ်။ Jaffa က Camel ဈေးနဲ့ နီးတာမို့ တချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ် Jaffa ကိုပါလိုက်ပို့ဖို့ နားပူနားဆာ တိုက်၇ပါတော့တယ်။ သနားစရာဖြစ်အောင် ပြောနေလို့ သနားလို့ပဲလား။ ဒါမှမဟုတ် တတွတ်တွတ် ပြောနေတာ နားပူလို့ပဲလား မသိ လိုက်တော့ ပို့မယ် အရစ်မရှည်ရတဲ့။ ယောက်ကျားများ အဲ့လို အေးအေးဆေးဆေး ပို့တာမဟုတ် ခံဝန်ချက်က တောင်းသေးတာ။ ကျွန်မလည်း လိုက်ပို့ ပြီးရော မြန်မြန် သဘောတူလိုက်၇တယ်။ မြို့ဟောင်းဆိုတော့ လမ်းတွေက လမ်းကျဉ်းတွေမို့ ကားအလွန်ကျပ်တော့ ပိတ်မိရင် သွားရော ဒါကို သူကြောက်တာလည်း ပါပါတယ်။ ကာမဲလ်ဈေးမှာ ဈေးဝယ် ပြီးတာနဲ့ ဂျာဖာဖက် ခြေဦးလှည့်လိုက်ပါတယ်။ (ကာမဲလ်ဈေးထဲလည်း လှည့်ပတ် ဓါတ်ပုံရိုက်သေးတာ ရတဲ့ အခွင့်အရေး လက်လွှတ်ခံလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ ။ မနက်ဖြန်မှ တင်မယ်လေနော့)
မြို့ထဲဝင်ပြီးတော့ နပိုလီယန်တံတားရောက်တော့ ကုန်းပေါ်အပြေးတက် ဓါတ်ပုံ တက်သုတ်ရိုက် ရိုက်ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျောက်တိုင်ဘက် တခါ ပြန်ပြေးရိုက်။ တခါ ကျောက်တိုင်ကုန်းပေါ်ကနေ ကလီယိုပက်ထွှာ ရေချိုးခန်းနေရာကို အပေါ်စီးကနေရိုက်၊ နောက် အပြေးအလွှားဆင်း အနီးကပ် ထပ်ရိုက်ပေါ့။ အခု ဓါတ်ပုံတွေက မဗိုက်တယောက် ချော်လဲမှာ မကြောက်ပဲ ရိုက်လာတဲ့ပုံတွေမို့ အဖိုးတန်တယ်နော်။ ရေချိုးခန်းနေရာ ရိုက်ပြီးတော့ တိုက်ကြိုတိုက်ကြား လမ်းကြားတွေ ရိုက်ချင်သော်ငြားလည်း အရစ်မရှည်ရဆိုတဲ့ စကားကြောင့် စိတ်လျှော့ခဲ့ရတယ်။ တံတားကုန်းပေါ် ပြန်တက်လာတော့ ခရီးသည်တွေ အုပ်စုလိုက်တွေ့ပါတယ်။ တံတားထိပ်ကနေ ဘုရားကျောင်းကို တခါထပ်ရိုက်။ တံတားပေါ်က ပြန်ဖြတ်တော့ မင်္ဂလာစုံတွဲ တတွဲကို တွေ့တယ်။ နပိုလီယန်ခေတ်ကလို အ၀တ်အစားနဲ့ ဆုတောင်းနေပုံကို ဓါတ်ပုံ၇ိုက်နေကြတာပါ။ ခရီးသည်တွေလည်း ဓါတ်ပုံဝိုင်းရိုက်နေတာ တွေ့လို့ ကိုယ်ပါလက်အလွတ်မခံပဲ ရိုက်လာခဲ့သေးတယ်။ Jaffa ကို လေ့လာရေးထွက်တာပဲလားတော့မသိ စစ်သမီး၊ စစ်သားတွေ တွေ့လို့ ဓါတ်ပုံလှမ်းရိုက်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ အသားဖြူဖြူ ဂျုးမလေးတွေ စစ်ဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ လှလိုက်တာ။ ကားပေါ်ပြန်တက်ပြီး ရှေ့ဆက်သွားမယ် ပြင်တော့ နပိုလီယန်တံတား အောက်က ဖြတ်မောင်းရပါတယ်။ မြင်ကွင်းလေးက တံတားတစင်းလုံးပေါ်တာမို့ ဓါတ်ပုံက ရိုက်ချင်ပြန်ရော။ ဒီတစ်ခါတော့ အိမ်ကြီးရှင်က မိန်းမ ပြာပြာ ပြာပြာနဲ့ လိုက်ရိုက်နေတာ မြင်လို့ သနားတယ်ထင်ပါ့ သူရိုက်ပေးမယ် ဆိုတာနဲ့ ကိုယ်ကအသာထိုင်နေလိုက်တယ်။
တံတားအောက်က ဖြတ်ထွက်လိုက်တော့ တည့်တည့်တိုးတာက ဘုရားကျောင်း။ ဒါနဲ့ ကားပေါ်က အပြေးအလွှားဆင်း ကျောင်းရှေ့က နပိုလီယန်ရုပ်တုလေးရယ် အမြောက်ရယ် နောက် ရုပ်တုပဲ ဘာရုပ်တုလည်း မသိဘူး သူ့လည်း ရိုက်ပေါ့။ ရှေ့ဆက် လျှောက်လိုက်တော့ တဲအဗီးလ်မြို့ကို စီးမြင်ရတဲ့ အဝေးကရှု့ခင်း။ လှလိုက်တာ ဒါနဲ့ ရိုက်ပြန်ပါရော။ ဘယ်ဘက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ မြေထဲပင်လယ်မှာ လှိုင်းတွေက ဖွေးပြီး လှနေပြန်ပါရော။ နောက် ဘာကို မြင်လဲဆိုတော့ ရှေးတုန်းက လက်ကျန် မီးပြတိုက်။ ဟိုး…အရင်တုန်းက Jaffa ကထွက်တဲ့ လိမ္မော်သီးဟာ သိပ်ကို နာမည်ကြီးပါသတဲ့။ အနောက် ဥရောပတခွင်ကို ဒီ Jaffa ကနေ လိမ္မော်သီး အဓိကတင်သွင်းပါတယ်တဲ့။ Jaffa မြို့ဟောင်း အလယ်မှာ လိမ္မော်ပင် တပင်ရှိပါတယ်။ အနုပညာ ဆန်းသစ်ချက်လို့ ပြောတာပဲ ကျွန်မတော့ အတိအကျမသိပါဘူး။ ကျောက်တုံးထဲမှာ လိမ္မော်ပင်ထည့်စိုက်ထားတာပါ။ မြေကြီးနဲ့ မထိပါဘူး လေပေါ်မှာ အလွတ်ပါ။ အပင်ကို ဒရစ်သွင်းနည်းနဲ့ ရေ၊ အစာ တွေကို ကျွေးထားပါတယ်။ သီးချိန်တန်ရင် သူလည်း သီးပါတယ်။ ပုံမှန် အပင်လိုပါ။ နောက် ဂျာဖာမြို့ဟောင်းကထွက် မြို့အ၀င်က နာရီစင်နဲ့ အဆောက်အဦးအဟောင်းရဲ့ ကြွင်းကျန်နေတဲ့ အပိုင်းတခုပဲ ဘာက ကြွင်းကျန်ခဲ့တာလဲတော့ မသိပါဘူး။ လှတာတော့ အတော်လှပြီး ခန့်ညားတာမို့ သူ့ကိုလည်း ချန်ခဲ့လို့ မဖြစ်လို့ အပြေးအလွှား ရိုက်ရပြန်ပါတယ်။ အိမ်ကြီးရှင်ကတော့ ကလေးထိန်းကျန်နေခဲ့တော့ ကျွန်မနောက် အတူမလိုက်နိုင်လို့ “ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ပဲ မဲမနေနဲ့ ကားဂရုစိုက်ဦး” လို့ လှမ်းအော်နေလေရဲ့။ လမ်းအလယ်ကနေ ၇ိုက်ရတာကိုး။ စိတ်ကျေနပ်တဲ့အထိ အားပါးတရ ဓါတ်ပုံတွေ လိုက်ရိုက်ပြီးတော့မှ လူလည်း တော်တော် မောပြီး မူးနေပြီ။ ကားပေါ်ပြန်ရောက်တော့ ရိုက်ခဲ့တာတွေပြန်စစ် မရိုက်ခဲ့တာ ရှိနေမစိုးလို့။ စိတ်ကျေနပ်တော့မှ အိမ်အပြန်ခရီး စလိုက်ပါတော့တယ်။
နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာပါတဲ့နာမည်တွေကို မမှီက ကိုယ့်အိမ်ကမီးဖိုချောင်ထဲက
သကြားပုလင်း၊ကော်ဖီပုလင်းထားထားတဲ့ပုံစံမျိုး ရေးသွားလိုက်တာများ အံ့ပါ့ဗျာ။
ဓာတ်ပုံကလဲတပုံဆို ဆိုသလောက် ခန့်ညားပါပေတော့။
အင်း ဗိုက်ထဲကကလေးက မွေးမွေးချင်း “ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်၊ခရီးထွက်မယ် ၊ဂေဇက်ဝင်မယ်” ဆိုပြီး၊
တနည်းအားဖြင့်တော့ ကျန်းမာရွှင်လန်းတဲ့မိခင်ကမွေးတာမို့ သားကောင်းသမီးမွန်ဖြစ်ပါစေဗျာ။
ကြုံရင်တော့ မမှီနဲ့ ဆုံဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ့မယ်ခင်ဗျာ။
ကိုသစ်မင်းရေ မနေ့က တင်ချင်ဇောနဲ့ ဓါတ်ပုံသွားရိုက်တာ။ နောက်တခါ ဒီအခွင့်အရေးက မရနိုင်ဘူးလေ။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မူးလို့ မလှုပ်နိုင်ဘူး။ ကလေးကတော့ ကိုသစ်မင်းပြောသလို ဖြစ်လာမှာတော့ သေချာတယ်။
ကျေးဇူးပါပဲမမှီ။ ရောက်ရခဲတဲ့မြို့၊ ကြည့်ရခဲတဲ့မြင်ကွင်းတွေပါ။ အားရပါးရကြည့်သွားပါတယ်။ တကယ့်သမိုင်းဝင်တွေမို့ခွင့်မတောင်းပဲကူးထားလိုက်ပါတယ်။ ပေးပါတယ်နော်။
လက်ရာတွေက လန်ထွက်နေကြောင်းပါ အန်တီမှီရေ
“မဗိုက်တစ်ယောက် ချော်လဲမှာ မကြောက်” ဆိုတာလေး တွေ့ မိတာနဲ့ ဒီစာတွေ.ဒီပုံတွေဟာ..အင်မတန်..တန်ဘိုးကြီးလှပါကြောင်း
ရွာထဲက ဓာတ်ပုံ ၀ါသနာအိုးတွေနဲ့ သာ စုပြီး ထွက်ကြလို့ ကတော့..ဘလိုများနေမည်မသိ..
မန်လေးက လေးပေါက်ကြီးရောက်လို့ .စွယ်တော်ကန်ကို ကုန်းလိုက်..ကွလိုက်..ဟိုချောင်းဒီချောင်းလုပ်ပြီး ရိုက်လိုက်နဲ့ ဗျာ
ဓာတ်ပုံ ၀ါသနာအိုးတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ် လေးပေါက်ကြီး မြင်မှသိတော့တယ်….အဲသလို..အဲသလို..
ကလီယိုပတ်ကလာ ရဲ့ ရေချိုးခန်း ပုံ ဓါတ်ပုံ ရိုက်မလားတဲ့
(နပိုလီယန်တံတား။ အိမ်ကြီးရှင် ရိုက်ပေးတာ။)
ဆိုတော့ ရိုက်ပေးတဲ့ ရွာ့သားမက်ကိုလည်း ကျေးဇူးပါပဲလို့
မမ ရေးထားတာကို ပြလိုက်တော့ ဖတ်ပြီး သဘောကျနေတယ် မမရေ။ ရွာ့သမက်ဆိုလို့လေ။
မှီရေ မြန်သလားမမေးနဲ့။ မဗိုက်မို့သာ တော်တော့ တယ်။
ပုံတွေကြည့် ရရုံမက စာပါဖတ်ရတော့ ကိုယ်တိုင် ရောက်ရသလိုကို ခံစားရပါတယ်။
တကဲ့ကို မျက်စိထဲ ပေါ်အောင်ရေးနိုင်တာနော်။
ဒီ ကိုလဲ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းကို Share လုပ်ပါဦးမယ်။
ကိတ်အသားပေါ် မှာ လိမ္မော်အရသာ ရှိတဲ့ Jaffa Cake ဆိုတာ အဲဒီ မြို့ရဲ့ လိမ္မော်သီး နဲ့များ လုပ်ခဲ့လို့လား မသိဘူး။ ဗဟုသုသ များစေတဲ့ Post အတွက် ကျေးဇူးပါ မှီရေ။
စာကြွင်း – အိမ်ကြီးရှင် ဆိုတာ စပ်နေဗလ လား။ jk :-)
မနေ့က ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်လွန်းလို့ ဇောနဲ့သွားတာ အမှန်ဆို အဲ့လမ်းတွေက ကျောက်တုံးတွေ ခင်းထားတာမို့ နဲနဲချော်တယ်။ အရင်တုန်းက Jaffa လိမ္မော်သီးဟာ အနောက်ဘက်မှာ တော်တော် နာမည်ကြီးတယ်တဲ့။ Jaffa Cake ဆိုတာ ဟုတ်ရင် ဟုတ်မှာ။
ကျွန်တော် ရဲ.ရာသီခွင်ပုံလေးနဲ.ဆိုတော့ ဆုတောင်းလို.ရတာပေါ့ ဓာတ်ပုံတွေအတွက် ကျေးဇူးပါမမမှီ
အမှန်တော့ မမှီလည်း ကိုယ့်ရာသီခွင်ကို ရိုက်လာတာ။ ဒါဆို ရွှေတိုက်စိုး မွေးနေ့ နီးပြီပေါ့နော့။
“မဗိုက်တစ်ယောက် ချော်လဲမှာ မကြောက်” ဆိုတဲ့အတိုင်း တကယ့် အဖိုးထိုတ်တန်တဲ့ ပုံလေးတွေပါပဲ ..
ပုံတွေရော စာတွေရော ဖတ်ရ ကြည့်ရတာ ကိုယ်တိုင်ရောက်ခဲ့သလိုကို
ခံစားရပါတယ် (မမှီရဲ့ စေတနာကြောင့်ထင်တယ်နော် )
အဟီး .. အသွင်တူလို့ အိမ်သူ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားက သိပ်မှန်တာပဲနော် .. မမှီတို့ စုံတွဲကိုပဲ ကြည့် … တစ်ယောက်က ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်တာကို …အိမ်ကြီးရှင်ကပါ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူရိုက်ပေးသေးတယ် … မမှီကံကောင်းတယ် …
ဓါတ်ပုံလေးတွေက ခမ်းနားလိုက်တာမမှီရေ …. ။ မြင်ခွင့်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ ။
ပုံတွေထဲမှာ အမှိုက်တစမှ မတွေ့တာ အံ့သြနေမိတာ … ။ ရာသီဥတုကလည်း စိုစိုစွပ်စွပ်မဟုတ်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်က သန့်ရှင်းနေတာပဲနော် … ။
တုံရေ လိုက်မပို့မချင်း နားပူမှာမို့ လိုက်ပို့တာ ဖြစ်မှာ။ သန့်တာကတော့ တကယ်သန့်တာ တုံရေ တနိုင်ငံလုံး ဘယ်နားသွားသွား အမှိုက်မရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပါလက်စတိုင်းဘက်ကို ၀င်ဖို့ ဂိတ်ကျော်ပြီး ပါလက်စတိုင်းဘက် ရောက်တာနဲ့ အမှိုက်တွေ လုံးဝ မြင်မကောင်းဘူး။ တနိုင်ငံတည်းတောင် ကွာတာတော့ အံ့သြစရာပဲ။ ဒီမှာက မိုးရွာလည်းေ၇တွေအားလုံး စက်ရုံကို ရောက်အောင် စနစ်တကျ လုပ်ထားတာမို့ မိုးရွာပြီးတာနဲ့ ရေတွေ လမ်းမမှာ မကျန်ခဲ့ဘူး။ေ၇ကို ၀ပ်ပြီး ကျန်မနေစေရဘူး။ စနစ်ကတော့ တကယ်ကျတာ တုံရေ။
ဘာပဲပြောပြော လိုက်ပို့ပေးတဲ့သူကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရမှာပဲလေ…။ သူလိုက်ပို့ပေးလို့သာ မမှီ ဒီပုံတွေတင်နိုင်တာမဟုတ်လား ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း ဂရုစိုက်ဦး ရွာသူတွေမြှောက်ပေးတိုင်းရှောက်လုပ်မနေနဲ့ဦး
မမှီရေ ကလီယိုပတ်ထရာက ရေချိုးတာ အခန်းလည်း မဟုတ်ဖူးနော် အကာလည်း မပါဘူး… ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီရေတွင်းက ရေကို ခပ်ပြီး ယူချိုးတာ နေမှာပါနော်..
ဒီပုံလေးတွေကတော့ တကယ့်ကို အမှတ်တရပဲ နေမှာနော်..
မမှီတင်ပေးတဲ့ ပုံနဲ့စာတွေကနေ ဗဟုသုတတွေရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါနော်၊ ကွန်နက်ရှင်မကောင်းလို့ ကွန်းမန့်က ၀င်ရေးလို့ မရလို့ ဒီနေ့မှရေးလို့ရလို့ပါနော်၊ မမှီတင်ထားတဲ့ ထိုင်းငါးပိထမင်းကျော်ကို ကျနော် ကျော်စားတာ အရမ်းစားကောင်းတာပဲ၊ မမီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်………..